के धर्म, संस्कृति र पहिचान यी तीनै चीज एकै हुन् अथवा फरक-फरक पाटा हुन् ? म त्यतातिर विवादको तोपबनेर पड्किन चहाँन्न ।
तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई, कताकता यी तीनै चीज एउटै हो कि भन्ने पो देख्छु म । फरक-फरक धर्म, फरक-फरक संस्कृति र फरक-फरक जातिय पहिचान, भेषभूषा र भाषा ।
साँच्चै भन्ने हो भने, यी फरकै रहेछन् कि क्यारे भन्ने पनि पो लागेर आयो । होइन भने, एउटै देशमा, एउटै राष्ट्रमा विभिन्न धर्म, संस्कृति र पहिचान किन हुनु पर्यो ?
धर्म त सम्पूर्ण राष्ट्रलाई मात्रै नभएर पूरै विश्वलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने पो हुनुपर्ने । जसरी कुरा आउने गरेको छ । के होइन र ? एउटै धर्म, एउटै जात, एउटै सँस्कृति, एउटै भेषभूषा र एउटै भषा ।
जसमा ईश्वर पुज्ने एउटै तरिका होस् । जातिय भिवेद नहोस् । उच्च र निच न होस् । छोरीको अंश सुनिश्चित गरियोस् । बिधुवाले आफ्नो सहयोगी जीवनसाथीसँग विवाह गर्ने कानुनी ऐन हौस् । अहिले कानुनी ऐन पाइए पनि बिधुवालाई स्वीकार्ने कोही पुरुष अघि बढ्दैन । किनकि समाजलाई उठ्न वर्षौ लाग्छ । जबसम्म निदाएका समाजलाई उठाउने चौकिदार न भएसम्म कोही जानेर उठ्नै चहाँन्न हाम्रो समाज । यो सर्बबिदितै हो । चाहे देश क्रान्तिका इतिहास होस् चाहे धर्म क्रान्तिका शास्त्रको इतिहास होस्, त्यसमा अध्यन गर्दा भेटिन्छन् यस्ता घट्नाहरू बग्रेल्तीसँग ।
कहीँ कुकुर पुज्ने र कहीँ कुकुरकै मासु खाने न होस् । कहीँ गाई पुज्ने अनि गाईकै मासु खाने न होस् । कहीँ सुङ्गुरलाई हराम भन्ने र कहीँ सुङ्गुर नै खाने न होस् । कहीँ पतिले सातसातवटी पत्नी ल्याउँदा हुने तर जवानी बिधुवाले सेतो र नीरस जीवन काट्न बाध्य न होस् । कहीँ गाईलाई लक्ष्मी माताको रूपमा पुज्ने र भैंसीलाई दूध दिन छाडेपछि ममको लागि मासुमा बेच्ने न होस् । के गाईले दूध दिने र भैँसीले दूधको ठाउँमा पिसाब दिने होर उसलाई घृणा । आहा ! अनि आची खाने कुकुर नै पुज्ने प्रथा । सुनेर बुझेर पनि लाजमर्दो र हाँसो उठ्दो छ हाम्रा आस्था र विश्वासहरू पनि
के यी सबै ईश्वर र अल्लाहले लागु गरेका हुन्त ? सती प्रथा कुनकुन राष्ट्रबाट आएको हो ? हामी संसारकै धर्मशास्त्रको अध्यन गरुम्त । अनि बिचारुम्त सती जानेजस्तो घिनलाग्दो र जिउँदै जलाएर विभत्स हत्या गरिनेजस्ता प्रथा चरम सीमाका परकाष्ठा नाघेका नियमहरू जसलाई स्वीकार्नु बाध्य हुनुपर्थ्यो एक समयमा बिधुवा महिलाहरू ।
के हामीलाई सृष्टि गर्ने ईश्वर र अल्लाहले बनाएका हुन्त यी नियमहरू ? के यत्ति मूर्ख थिए त हामीलाई बनाउने सृष्टि कर्ता, जसले सबैचीज ठीकठीक प्रणालीबाट सृष्टिलाई बनाए । के हामीलाई चलाउने शास्त्र यत्ति गलत तरिकाले लेख्छ त ? के यस्ता प्रश्नहरू किन उमृएन हाम्रा आदर्णिय विद्वानहरूमा ? कि विभिन्न समयकाल र राज्यगर्ने राजाहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि बनाएका हुन् यी सबै विहियात नियमहरू ?
फेरि किन आए र कसरी आए र कहाँबाट आए विश्वमा नै न भएका नियम ? हिन्दुमै लोग्नेमर्दा सती जानुपर्ने घिनलाग्दो प्रथा । के वेदमा छ लेखिएको यस्तो नियम र सास्तीको बारेमा ? आज सती प्रथा हटेको कति नै भएर ? त्यही ८५-९० वर्ष ? यसो बिचार्नोस्त यी चलन, प्रथा, संस्कृति, धर्म, भेषभूषा र भाषा कस्ले चलाए होला ? के ईश्वर र अल्लाहले ?
फेरि किन धर्मै पिच्छे, अलग नियम, संस्कृति, रितिरिवाज, जातजाति र भाषा अनि भेषभूषा ? के लाग्दैन हामीलाई कि चलन चल्तीका हामीले स्वीकार्दै आएका यी धर्म, संस्कृति, जातजाती, भाषा र भेषभूषा सबै समय र कालखण्डका राजामहाराजाहरूले फेर्दै आएका र बनाउँदै आएका हुन् भनेर ?
हेर्नोस्त, प्रकृतिका नियमहरू के देखिन्छ उल्टो कहीँ ? कि छ ?
यो लेख एउटा फेसबूकको सानो सकारात्मक स्टाटसको कारणले तयार भएको हो । तर केही अक्षरका खेती गर्ने मित्रहरूले स्टाटसको मूलभुत अर्थ नै न बुझी बिरोध गरेका थिए । जसमा केही आफूलाई धर्मको आदर्श मान्नेहरूले पनि वाहियात भनेर बिरोध गरेका थिए । जुन स्टाटस थियो एक चर्चित अधिवक्ता '' मोहन साशंकर '' को ।
लेखक : राजबाबु श्रेष्ठ 'सागर' गौशाला न. पा. १ महोत्तरी